छोरा छोरीहरु फेसबुक चलाउँछन् ? निगरानी गर्नुस नत्र आत्महत्या गर्न सक्छन् ! « News24 : Premium News Channel
छोरा छोरीहरु फेसबुक चलाउँछन् ? निगरानी गर्नुस नत्र आत्महत्या गर्न सक्छन् !
जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको विड – यस्तै भएको छ सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग नेपालको सन्दर्भमा । सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा पनि फेसबुक प्रतिको आकर्षणले सबैलाई छोपेको छ , सबै उमेर समूहका फेसबुकप्रति आकर्षित हुँदा किशोर किशोरीहरुको सबै थोक अभिव्यक्त गर्ने माध्यम नै यही बनेको छ । सकारात्मक र सही प्रयोग गर्नेहरुका लागि फेसबुक सही माध्यम बन्दै गर्दा यस्को दुरुपयोगमा रमाउनेहरुका लागि भने फेसबुक अपराधको आधार पनि बन्दै गएको छ ।
कतै तीन दशक पुराना मित्र र परिवारका पुनर्मिलन गराउने काम पनि गरेको छ फेसबुकले , कतै दुःखी र गरीब तथा असहायहरुलाई सहयोग पनि जुटाएको छ फेसबुकले । समाजमा हुन नहुने काम प्रति सचेत समेत गराउने कार्य गर्दै गर्दा कतै अपराधिक मनोवृतिका व्यक्तिहरुको लागि भने यस्को त्यही हिसाबमा दुरुपयोग समेत भएको छ ।
मानिस स्वभावत भावुक प्राणी पनि हो । भनिन्छ २४ घण्टाको समयमा मानिसहरुको दिमागले १३ सेकेण्डको समयमा हरेक दिन यस्को विचित्र कार्य गर्छ , जस्ले जस्तो सुकै अवस्था पनि निम्त्याछ । यही १३ सेकेण्डको समयलाई मनोविज्ञहरुले मानिसहरुको नियन्त्रण वाहिरको समयको संज्ञा दिएका छन् । कसैलाई आत्महत्या गर्न प्रेरित गराउन, कसैलाई कुकर्म गर्ने आँट गर्न यही १३ सेकेण्डको समय काफी छ । यही समय भित्र धेरैले फेसबुकमा धेरै थोक पोत्छन नै । फेसबुकले पनि रोक्न नसकेको यही अपराधले यस्को दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । कतिले जिन्दगीबाट छुट्टी माग्छन, कसैले प्रेमी र परिवारबाट , यो दुस्साहस व्यक्त गर्नेहरुका लागि फेसबुकको परिकल्पना पक्कै गरिएको थिएन नै तर आज भोलि यस्तैहरुको वोलवाला बढे झै भएको छ फेसबुकमा ।
यसो भनिरहँदा फेसबुकमापोष्ट भएका कति स्टाटसहरु छन् जसको कारण तपाईं एक पटक सोच्नबाध्य हुनुपर्छ । प्रायजसो टिन एजर समूहका यूबा तथा यूबतीहरुले पोष्ट गर्ने गरेका स्टाटसहरुले क्षण भरमै अपत्यारिलो घटना निम्त्याएयको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यस्ता थुप्रै स्टाटसहरु छन् जसको कारण अब तपाईंको आङ नै सिरिङ्ग हुनु पर्छ र तपाइंले आफ्नो केटा केटीहरुलाई निगरानीमा राख्नु पर्छ नत्र उनीहरुले ज्यानै लिन सक्छन् । तपाइंको केटा केटीहरुको मुड कस्तो छ , खुशी छन् या निराश , के कारणले उदाश छन् यो सबै यावत कुराहरु तपाईंको छोरा छोरीहरुले फेसबुकमा पोष्ट गरेको स्टाटसहरु बाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आफ्ना सन्तान र सन्ततिहरुलाई सामाजिक सञ्जालको दुनियाँबाट टाढा राख्न सक्ने अवस्था पक्कै छैन तर नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्था भने टाढा पनि छैन । यस्का लागि निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक छ नै , जस्ले बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले विपत्तिलाई घर भित्र ननिम्त्याओस ।
सामाजिक सञ्जालमा बढेको दुरुपयोग मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षामा नै आँच पु¥याउने खालको कार्य हुन थालेपछि धेरै देशले फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यस्लाई धेरै देशको माटो र समाज सुहाउँदो निर्णय भनेर आफुहरुको कार्यको रक्षा गरेका छन् । यही भएर पनि इन्टरनेटको सहारामा उत्पादित सबभन्दा सशक्त माध्यम फेसबुक पनि साइबर क्राइमबाट अछुतो छैन् । सामान्य ब्यक्तिदेखि उच्च ओहोदाका ब्यक्तिसम्म फेसबुक दुरुपयोगले पीडित र हैरान बन्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु पनि छन् । नेपालमा फेसबुक प्रयोग गर्नेको संख्या अन्दाजी १८ लाखको हाराहारीमा छ । त्यस्तै अन्य सामाजिक सञ्जालप्रति टिन एजरहरुको आकर्षण नबढेको भने होइन तर यसको तुलनामा धरै फेसबुकका युजर छन् । एक पटक तपाईं हामीले सोच्ने पर्ने बेलाआएको छ नत्र पछि न्याउरी मारी पछुतो मात्र हुनेछ ।